Masedonia: Tsy azo ihodivirana ny fifidianana atsy ho atsy, ny daty no tsy fantatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2011 9:26 GMT
Andro maromaro taorian'ny nitenenan'i Washington, D.C., hilaza amin'ny Filoha lefitra Amerikana sy amin'ny Sekreteram-panjakana, izay nilaza fanahiana goavana mikasika ny zavatra misy any Masedonia, dia nilaza ny PM Nikola Gruevski fa manaiky ny fanambin'ny mpanohitra izy hitsapa ny fanohanan'ny vahoaka amin'ny fifidianana ho avy tsy ho ela.
Nilaza [MKD] ny mpitoraka bilaogy Neutralec (“Ilay tsy miloko io”) amin'ny fanehoana ny tsikerany sy ny horonan-tsary misy ny resaka mivantana ataon'ny PM's :
Omaly tamin'ny fahitalavitra Sitel, nanambara ny praiminisitsika sady filohan'ny antoko ara-politika lehibe indrindra [VMRO-DPMNE] fa hifaninana amin'i[Branko Crvenkovski]izy , ary nilaza ny fahavononany amin'ny fikarakarana fifidianana tsy ho ela izy toy ny tamin'ny 2008. Nandritra ny resadresaka nataony omaly, dia nilaza i Mr. Nikola Gruevski fa efa niomana ny hanokana ny taona ho amin'ny fampitomboana ara-toekarena izy ary hamarana ny fanovana atao ankehitriny, nefa mety hiova izany raha toa ka manaiky ny fifaninanana [ny mpitarika ny antoko politika mpanohitra lehibe indrindra] , izany hoe ny hetahetan'ny [SDSM] hisian'ny fifidianana no antony hampihena kokoa ny fivoaran'i Masedonia.
Manoratra manohitra ny fifidianana roa volana lasa izay, ary mbola manohitra foana.Tokony handrefy sy hampitaha ny mpikambana ao aminy amin'ny toerana hafa rehetra ry [Grujo], [Branko], [Ljubčo] na [Ljube] . Tokony ho lany amin'ny fanontana vatom-pifidianana sy ny hatsikana mandritra ny 20 andron'ny fampielezan-kevitry ny fifidianana sy ny 2 andron'ny fahanginana ara-pifidianana ny volan'ny mpandoa hetra. Na izany aza, fotoam-piroboroboan'ny fahitalavitra sy ny asan-gazety an-tsoratra, hahazoana vola be, avy any am-paosin'ny mponina, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana indray izany.
Naharitra mihitsy vao namaly ny solontenan'ny antoko mpanohitra, satria andro iray taoriana ry zareo vao namoaka fanambarana ofisialy. Mandritra izany, naneho lahatsoratra fiantsiana ny bilaogin'iAlek Careca, [MKD] mpirona amin'ny antoko ankavanana izay ahitana rakikira efa taloha avy amin'ny fandaharan'ny fahitalavitra mampihomehy K-15. Ao anatin'ilay horonantsarimihetsikana hira, natao tamin'ny fifidianana tamin'ny taona maro lasa izay, olona maro karazana no miantso an'i Branko [Crvenkovski] mba hiala.
Eo amin'ny tsikera mikasika ny lahatsoratr'i Careca, maneho rohy [MKD] mikasika ny lohahevitra vaovao ny mpitoraka bilaogy avy amin'ny elatra havia Barabbas izay miangavy ny ao amin'ny foiben'ny antoko mpanohitra fa ny mpikambana ao dia tokony hiandry ny valinteny ofisialy izay omen'ny mpitarika azy eo am-pihainoana ny hira “Pada vlada” (Mitontongana ny Governemanta).
Avy amin'ny horonan-tsary mihetsika Serbiana ny hira The Professional (2003), hirain'ny mpihira pop-rock malaza Bajaga.
Taty aoriana kely, naneho hevitra [MKD] ihany koa i Barabass ary nandefa ny vaovao farany:
Nanapa-kevitra ny hanao mahery fo i Gugi ary natsipiny tany ny fonon-tanany.
Nanao toy izany koa i B.C. – andeha izany atao amin'ny volana Jona [MKD].
Fantatsika daholo nefa inona no ho tohiny – “BC mahafinaritra, Grujo mpitoraka, mpanohitra mampatahotra, fitantanana very ara-potoana sy ara-toerana, bla bla bla… Raha ny tena marina, tsy dia miraika loatra amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny tenako.
Amin'ny maha-mpizaka zom-pirenena ny tenako, dia mihevitra aho fa tsara daholo rehefa fifidianana, satria mialohan'ny fifidianana, dia mangalatra kely foana ny governemanta ary mandany ny volma-bahoaka amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filam-bahoaka, amin'izay izy mahazo mpifidy betsaka. Na izany aza, raha ny hevitro manokana, aleo hisy fifidianana isan-taona.
Tsy dia hoe tena sarotra ny raharaha. Hoy ny governemanta hoe afaka atao amin'ny Aprily ny fifidianana (maivana kokoa, raha etsy andaniny ny governemanta mbola manana ny tahany tsara hiantoka ny hamaroan'ny vatony). Manaiky ny hiverina amin'ny Parlemanta ny mpanohitra ary handray anjara amin'ny fanomanana amin'ny volana Jona, raha toa kosa ny fepetra [MKD] izay apetrany ka madio araka ny hitany.